Ogaden Press Agency(OPA) News headlines from Ogaden,Ethiopia,Somalia,All Regions of Horn of Africa and the world. Shariif Xasan oo sheegay inuu ka qaybgalayo Doorashada Madaxnimo ee Soomaaliya, kana hadlay eedeyntii loo jeediyay.
Posted by Ogadentoday-Chief Editor on July 20 2012 05:34:38
Jimco, July 20, 2012 (Ogadentoday Press) � Afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay inuu ka qaybgalayo doorashada madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya oo dhici doona bisha Ogoosto ee soo socota, isagoo sidoo kale iska fogeeyay eedeymihii ay u soo jeediyeen guddiga baarista Qaramada Midoobay. Shariif Xasan ayaa sheegay inuusan doonayn inuu isku sharraxo xilka afhayeenka baarlamaanka oo uu hadda hayo, isagoo sheegay inuu dhawaan ku dhawaaqi doono inuu ka qaybgalay doorashada madaxnimo ee dalka.
Shariif Xasan oo sheegay inuu ka qaybgalayo Doorashada Madaxnimo ee Soomaaliya, kana hadlay eedeyntii loo jeediyay.
Jimco, July 20, 2012 (Ogadentoday Press) � Afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya, Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay inuu ka qaybgalayo doorashada madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya oo dhici doona bisha Ogoosto ee soo socota, isagoo sidoo kale iska fogeeyay eedeymihii ay u soo jeediyeen guddiga baarista Qaramada Midoobay.
"Eedeyntan waa mid dano gaar ah laga leeyahay, ujeeddada laga leeyahayna waa mid lagu doonayo in lagu qariyo waxqabadka dowladda, waayo dhaqaale aan dadka ka ururinay ayaan wax ku qabannay," ayuu yiri guddoomiyaha baarlamaanka DKMG ah ee Soomaaliya.